Sniper 3D Gun Shooter: Free Elite ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းများ Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Sniper 3D ဂွန်သေနတ်သမား: အခမဲ့ Elite သေနတ်ပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ
Sniper 3D ဂွန်သေနတ်သမား: အခမဲ့ Elite အားကစားပြိုင်ပွဲ APK ကိုသေနတ်ပစ်
AIM နှင့်အညွန့်, အကောင်းဆုံးကို FPS ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းအခမဲ့များထဲမှယခု download လုပ်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်အပြည့်အဝမတူညီတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်ရာဇဝတ်ကောင်နှင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွား။
3 စကား Sniper 7D Assassin®: အကြီးဂိမ်း, ကြောက်မက်ဘွယ်ပုံရိပ်ယောင်နှင့်ဖျော်ဖြေမှုမစ်ရှင်။ လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး? ဒါဟာအချိန်လွန်မှအခမဲ့ fps ဂိမ်းပဲ! တစ်ဦးဂတ်စ် Hitman မှဗုံးတိုက်ခိုက်မှုမှပြန်ပေးဆွဲကနေသားကောင်ကိုခုခံကာကွယ်: ဓားစာခံရှင်သန်မှုအရေးပါပါ!
- လှပသောကမ်းခြေဖို့ကြီးမားတဲ့အမြို့မြို့တို့မှ, မျိုးစုံပွိုအတွက် Play
- letal သေနတ်နှင့်သေတတ်သောလက်နက်တန်ချိန်
- စွဲ FPS ဂိမ်း
- အခမဲ့ဂိမ်း: သင်၏ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်ပေါ်မှာနှစ်ဦးစလုံးကစား
သူတို့အားစကားမပြောနိုင်သောထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, သေနတ်ပစ်ဂိမ်းကိုမေ့လျော့။ ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့တာဝန်, အချိန်ဆန့်ကျင်ပြိုင်ကားရဟတ်ယာဉ်များပေါက်ကွဲ, နှေးပြကွက်ထဲမှာဖုတ်ကောင်များနှင့်အတော်လေးအနည်းငယ်ရိုက်ချက်များသတ်ဖြတ်ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ ရှင်သန်မှုအတွက်လိုအပ်သောပါ! သင်တို့မူကား, ထိုပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်သားကောင်များကိုကယ်တင်နှင့်လူအစုအဝေး၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောသာညာဘက်ပစ်မှတ်ကိုသတ်နိုင်သလဲ သငျသညျပြန့်ပွားခြင်းမှအမျိုးအမည်မသိဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရပ်တန့်နိုင်သလား? သင်အချိန်အတွင်းလုပ်ကြံထဲကယူကြမည်နည်း သငျသညျလူအချွေတာ၏တာဝန်များအတွက်ခေါ်ဆိုခကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သင်တို့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အယူဝါဒအချည်းနှီးဖြစ်မသွားပါစေနဲ့!
အကောင်းဆုံးပထမဆုံးလူတစ်ဦးသေနတ်သမား (fps) အရေးယူဂိမ်း! တိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကောင်းဆုံးစနိုက်ပါ Be! အဆိုပါတိုက်ခိုက်ရေးအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်, သင်သူရဲကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
"အာလဖ, Bravo, ချာလီ, သင်ကူးယူသလဲ?" ပစ်မှတ်ကိုရှာပါ, ရည်ရွယ်, shoot ။
အဆိုပါလူဆိုးစာရင်းအေးဂျင့်များနှင့်သူလျှိုအနေဖြင့်ပြည်နယ်လျှို့ဝှက်ချက်များကို Save နှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်ပွားခြင်းမှသူတို့ကိုရပ်တန့်။ သင်ကျွမ်းကျင်မှုများရှိပါသလား? အကြီးအကျယ်နျူကလီးယားပြိုင်ဆိုင်မှု၌သင်တို့၏တိုင်းပြည်ကိုကူညီပါ။
●အဆိုပါဓားစာခံရန်သူကိုခံတပ်အတွင်းဖြစ်ကြသည်။ သင်ဖွင့်လှစ်မှတဆင့်အတွက်မုနျတိုငျး, ဒါမှမဟုတ် nite မှာတက်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြမည်နည်း
●အယ်လ် Diablo, ပြစ်မှုဆိုင်ရာရှငျဘုရငျကို pin ကို, မွို့၌ဖျက်ဆီးဖန်တီး - သင်သည်ဤပုန်ကန်မှုအဆုံးသတ်ကြမည်နည်း
●အသကျရှငျမဆိုဖုတ်ကောင်မထားခဲ့ပါ !! သင်ဤကြောက်မက်ဘွယ် fps ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းထဲမှာရှိသမျှသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့်စွန့်စားမှုအဘို့ပြင်ဆင်ထားပါသလား? သငျသညျလူသားမျိုးနွယ်၏ရှင်သန်မှုကိုအာမခံနိုင်ပါသလား?
●ကြောက်မက်ဘွယ်လက်နက်များ Unlock နှင့်အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် Evolution သူတို့နှင့်အတူ upgrade:
သင်ကစားပွဲထဲမှာရရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါကျောက်မျက်နှင့်အတူတည်ရှိသောအကောင်းဆုံး Sniper ရိုင်ဖယ်, ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်သေနတ်များသို့မဟုတ်ပစ္စတို Buy! ပိုပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစီရင်ကြောင်းကျည်ဆံတွေရရန် ammo, ထိုချုပ်ကိုင်ထားလျက်, caliber upgrade, ပိုကောင်းတဲ့အကွာအဝေး, အတိုင်းအတာ, တည်ငြိမ်မှု, ဒါမှမဟုတ် zoom ကိုရှိသည်။ သင်အမဲလိုက်ရိုင်ဖယ်သည်ကြောက်မက်ဘွယ်ချေမှုန်းရေး mp5 တစ် Glock ဒါမှမဟုတ်လက်နက်တိုက်တစ်ဦး Colt ကိုရွေးချယ်ကြမည်နည်း
Sniper 3D ပျော်စရာရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်အွန်လိုင်းအမြဲဖြစ်သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူး။ တစ်ဦး (အစစ်အမှန်) လေယာဉ်ပေါ်ပျံနေချိန်တွင်သင်ကလမ်းပေါ်တွင်ကားထဲတွင်, မြေအောက်ရထားအတွင်းအော့ဖ်လိုင်းကခံစားနိုင်။ အခြိနျမှနျမှ, ကအွန်လိုင်းအပိုဆောင်း (အခမဲ့) content တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
● PvP mode ကို
အဆိုပါ pvp mode ကိုထွက်ကြိုးစားပါ: သင်၏သေနတ်ပြင်ဆင်သင်တို့၏ရန်သူကိုလိုက်ရှာနိုင်။ အဆိုပါ pvp mode ကိုသတ်ဖြတ်မှုနှင့်အမဲလိုက်၌သင်တို့၏မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကြာနှငျ့သငျသေလွန်သောသူတို့သည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့သင်တန်းနှင့်လုပ်ရပ်များ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပါ! သငျသညျယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအခြားကစားသမားအတူတက် join လို့ရပါတယ်။ သငျသညျဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့သနေိုငျစနိုက်ပါဖြစ်လာ!
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်း, သင်သည်ဝဘ်ကိုရယူရန်မယ့်အစားကိုအသုံးပြုဖို့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်သီချင်းနားထောင်ချင်ချင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏မိုဘိုင်းအစီအစဉ်ကနေအချက်အလက်များ၏တန်ချိန်လောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကန့်သတ်ဒေတာအသုံးပြုမှုနှင့်အတူပျော်စရာရှိသည်။
Sniper 3D Assassin®အခမဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ရင့်ကျက်အကြောင်းအရာနှင့်စစ်မှန်သောငွေ optional ကို In-app ကိုဝယ်ယူမှုပါရှိသည်။ သင်သည်သင်၏လေးတွေနှင့်အငယ်ယောက်ျားလေးကနေကွယ်ပျောက်ထားရန်လိုပေမည်
Sniper 3D Assassin®အခမဲ့များအတွက်ပျော်စရာဂိမ်းများအားဖြင့်သင်တို့မှနှုတ်ဆောင်သည်။
+ လူပျို Player ကို mode မှာရှိသမျှကို 21 မြို့ကြီးများမှတဆင့် Play
+ သည့်အချိန်နှင့်တပြေးညီကစားသူအများအပြား PvP Arena အတွက်အသစ်အလိခ်မှတဆင့်ရှေ့တိုး
အဆိုပါ Squad စစ်ပွဲများအတွက်အခြားသူများကိုဆန့်ကျင် + တိုက်ပွဲ
Sniper 3D ဂွန်သေနတ်သမား: အခမဲ့ Elite သေနတ်ပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ
95.48 ကို MB